TuLotero, tamba rotari kubva ku smartphone yako | IPhone nhau
TuLotero, kana maitiro ekuridza lotari kubva kune yako smartphone
Yakave nguva yakareba kubvira patinokwanisa kuita ese marudzi enzira kubva internet, kubva pakutenga zvipfeko kune mamwe maitiro akakosha atichazoshandisa DNIe. Tinogona zvakare kuita mamwe marudzi enzira dzakaita sekuhodha chikafu kana kutengesa zvinhu zvatisingachashandise. Uye kutamba lottery? Zvakanaka hongu, iwe unogona zvakare kutenda kune TuLotero, chishandiso chinogona kutsanangurwa sekunge uine tobacconist kana lottery management muchanza cheruoko rwedu,
Uyezve, mubairo wechitatu weEuroMillions dhizaini Chishanu chapfuura, Chikumi 10, chakatorwa nemushandisi wekushandisa, chimwe chinhu chinoita TuLotero mune yekutanga nharembozha muSpain iyo inogovera mubairo wechitatu wemaEuromillions.
Kamwe patinonyoresa uye nekuisa iko kunyorera tichaona rondedzero ye inotevera maraffles achaitwa muNational Lottery, Bonoloto, iyo Quiniela uye mamwe maHofisi eBeta. Chinhu chakanaka pamusoro pechikamu ichi ndechekuti isu tine ruzivo rwese rwunogona kutifadza, senge mubairo wekutora uye mhando yerotari yacho, munzvimbo shoma uye, kana tichifarira, isu tinongofanirwa kubata iyo "Tamba "bhatani. Kunyangwe, sezvo rudzi urwu rwekutenga rotari rwuri kuita zvakafanana nekutenga panyama, kutanga isu tichafanirwa kutora nhanho yapfuura, inozove yekuenda kune "Balance €" chikamu uye kuwedzera imwe bhalansi.
1 TuLotero inounza matikiti erotari kwauri kwauri chero kwauri
2 Kubhejera zviripo kwemakirabhu
3 TuLotero inopa € 1 kuvashandisi vatsva vanosaina
TuLotero inounza matikiti erotari kwauri kwauri chero kwauri
Kana iwe uchida aya marudzi ekubhejera, iwe unenge usingade kuva nematikiti akawanda mudhirowa, handiti? Ichi chinhu chinowanzozivikanwa pane mamwe mazuva, seKisimusi Lottery, patinenge tine matikiti kubva kune iyo iri pakona bhawa kuenda kune iyo yekurovedza muviri kwatisingachaendi. Maitiro ekutarisa kana chimwe chinhu chatibata? Kana isu tichiita zvese nemawoko, tinogona kupedza maawa akati wandei tichitarisa, zvinoenderana nemabatirwo atakaitwa. Pano isu tine imwe yesimba reTuLotero: mashandisiro atinoita pa smartphone uye izvi zvishandiso zvinogona kutitumira isu zviziviso, kana isu takapihwa mune chero emaraffles atakatora chikamu maari, isu tichazozviona ipapo ipapo kugamuchira ziviso. Kana isu tisina chivimbo chakazara, chimwe chinhu chinganzwisisike patinenge tichitamba € 45.000.000, sezvo tichigona zvakare kutarisa mhedzisiro yezvose zvinotorwa kubva ku "Mhedzisiro" tebhu. Kana isu tikangotamba mhando imwe yerotari uye isu tichida kungoona iwo mhedzisiro, muchikamu chino tine mhedzisiro yeEuromillions, Primitiva, Gordo, Bonoloto, Lotería naQuiniela.
Kubhejera zviripo kwemakirabhu
Handizive kana iwe wakambozviita, asi zvakajairika kubheja neboka rehama. Pfungwa iyi, semuenzaniso, muQuiniela, kuisa imwe mari imwe neimwe, kuitira kuti kubhejera kwakajeka kuitwe (pamwe nekaviri kana katatu) kana yakawanda nhamba yekubhejera. Kana tikiti rakapihwa, mamirioni akati wandei anogona kugoverwa pakati pevanhu vakati wandei, izvo hazvina kushata zvachose kana mari yedu yanga isina kunyanya kukwirira. Iyi sarudzo inowanikwawo muTuLotero, chero bedzi isu tichiona kuti dhiza rine izwi pasi Peñas.
TuLotero inopa € 1 kuvashandisi vatsva vanosaina
Kana usati waita pfungwa dzako, unoda here edza iyo app uye haudi kubhadhara muyedzo uyu, TuLotero inopa € 1 kune vashandisi vatsva vanosaina tanga (hapana chekudzima iyo account uye kuitazve kuti igamuchire imwe). Kuti tiite izvi, kana tichinyoresa tinofanirwa kumisikidza sarudzo "Ndine kodhi yekusimudzira" uye nyora kodhi «FTW1 ″, Pasina makotesheni, mubhokisi rinoti "Promotional code (sarudzo)".
Zvinoita sekunge zvakakosha kuratidza kuti iyo yese yekubheja maitiro kubva kuTuLotero zvinoita sekunge tiri kutenga iyo rotari mukutonga kwepanyama. Muchokwadi, matikiti ese akasimbiswa uye akachengetedzwa muHurumende Lottery Administration, saka yedu bheji richava 100% rinoshanda uye rakachengeteka. Kune rimwe divi, isu hatizofanirwe kubhadhara chero komisheni yekuita manejimendi, saka kana tikazviisa zvese pamwe chete, ndinofunga TuLotero chikumbiro chakakurudzirwa chose: tichaita zvakafanana sekunge takaenda kune manejimendi, asi kubva chero kupi pasi uye kana Une iwe uine chero mibvunzo, usazeze kushanyira webhusaiti ye TuLotero.
TL: Marotari uye Kubhejera kweHurumendevakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » TuLotero, kana maitiro ekuridza lotari kubva kune yako smartphone
Ndine kodhi inokupa iwe € 5 ndeiyi: 2908561 Luck!
EDDY BUSTILLOS akadaro
INI NDINOBVA KUPERU, NDINOGONA KUTamba NOKUCHENGETA KANA NDIKAKUNDA KANA KUTI DZENYIKA DZEEOPA
Pindura kuna EDDY BUSTILLOS
Apple Mepu muIOS 10 ichatiyeuchidza kwatakamisa mota
TuLotero isingakundike rotari kunyorera pane iOS